TI10 အပွီးမှာ လိဂျစနဈကိုပွောငျးလဲမယျ့ Dota2ရဲ့ ပွိုငျပှဲကငျြးပမှုပုံစံအသဈ – Gaming Noodle
Ti10 အပွီးမှာတော့ အခုလကျရှိမွငျတှနေ့ရေတဲ့ Dota Pro Circuit နညျးလမျးကိုလညျး ပွောငျးလဲစှနျ့ပယျတော့မှာဖွဈပွီး Tier2နဲ့3အဆငျ့ အသငျးတှကေို ပိုတိုးတကျစမေယျ့ ဒီဇိုငျးနဲ့ အစားထိုးသှားမယျလို့ Valve က လသေံပဈထားပွီးသားပါ။
ယနမှေ့ာတော့ Dota2Website မှာ အသေးစိတျ Format တကျလာခဲ့ပါပွီ။ Ti10 အပွီး 2020 – 21 Dota2Season ကို Season3ခု ခှဲခွမျးကငျြးပသှားမှာဖွဈပွီး NA, SA, EU, CIS, SEA, China Region ခွောကျခုတို့မှာ သကျဆိုငျရာ Regional League တဈခုဆီ ကစားရမှာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ တဈနှဈအတှငျး လိဂျသုံးခါ ကစားရမှာဖွဈပွီး သုံးခါ တနျးဆငျး၊ တနျးတကျအသငျးတှေ ပျေါလာမယျ၊ အဆုံးသတျမှာတော့ The International နဲ့ပဲ နိဂုံးခြုပျမှာဖွဈပါတယျ။
Regional Leagues ဆိုတာ –
အထကျမှာဖျောပွခဲ့တဲ့ ဒသေ ၆ မြိုးမှာ လိဂျပွိုငျပှဲတဈခုစီအတှကျ Season တဈခုကို USD 280,000 ဆုကွေးငှေ ပေးပွီးကငျြးပသှားမှာဖွဈပါတယျ။ Region တဈခုကို တဈနှဈအတှငျး Season ၃ ခုကငျြးပမှာဆိုတော့ စုစုပေါငျး USD 840,000 (280,000 x 3) ဆုကွေးပေးသှားမှာဖွဈပွီး Region ၆ ခုနဲ့မွှောကျရငျ တဈနှဈစာကို ဆုကွေးငှခေညျြးပဲ စုစုပေါငျး ဒျေါလာငါးသနျးကြျော ခြီးမွှငျ့မှာပါ။
လိဂျဆိုတဲ့အတိုငျး အသငျး ၈ သငျးစီပါဝငျတဲ့ Division နှဈခု ခှဲပွီး ဆော့ကစားစမှောပါ။ Upper Division နဲ့ Lower Division လို့ပဲ လောလောဆယျ အမညျပေးထားပွီး Season တဈခုပွီးတိုငျး Upper Division က အောကျဆုံးအသငျးနှဈသငျးက Lower Division ကို တနျးဆငျး၊ Lower Division က အောကျဆုံးနှဈသငျးနရောမှာ Open Qualifier ထိပျဆုံးအသငျးနှဈသငျးနဲ့ အစားထိုး ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကစားကွမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီပွိုငျပှဲကငျြးပမှုပုံစံက အသငျးတှေ ဟိုပွေးဒီပွေးလိုကျပွိုငျနရေတဲ့ မဂြော၊ မိုငျနာပှဲတှအေစား အတညျတကြ အမွဲလကျရညျသှေးနရေမယျ့ပုံကို ပွောငျးလဲလိုကျတာပါပဲ။
လိဂျ Season တဈခုကို ရကျသတ်တပတျ ၆ ခု ကွာမွငျ့မှာဖွဈပွီး Bo3 ပုံစံနဲ့ ပတျလညျ (Round Robin) ကစားစမှော ဖွဈပါတယျ။ အားပေးရတာ လှယျကူစဖေို့အတှကျလညျး Region ၆ ခု၊ League ၂ ခုကို တဈခုနဲ့တဈခု အခြိနျဇယား မထပျအောငျ ရေးဆှဲထားတာတှရေ့ပါတယျ။ တဈပတျကို Region တဈခုမှာ သုံးပှဲကစားရမှာဖွဈပါတယျ။ နစေ့ဉျပှဲရှိနမေယျ့ အနအေထားအပွငျ Open Qualifier တှပေါ သုံးခါကငျြးပဦးမှာဆိုတော့ Bet Lord တှေ အကွိုကျပဲ။
ပထမဦးဆုံး Season မှာတော့ Upper နဲ့ Lower Division ဝငျမယျ့ အသငျးတှကေို Valve ကပဲ ဆုံးဖွတျပေးမှာပါ။ အသငျးတှဟော Season မစခငျ ဘယျ Region ကနေ ဝငျဆော့မလဲဆိုတာ ဆုံးဖွတျရမှာဖွဈပါတယျ။ Ti10 (The International 2020) ပွီးမှပဲ ဆုံးဖွတျသှားမှာပါ။
Region တဈခုမှာ ယှဉျပွိုငျဖို့ဆိုရငျ အဆိုပါအသငျးရဲ့အသငျးသား အနညျးဆုံးသုံးဦးဟာ ယှဉျပွိုငျလိုတဲ့ Region ထဲမှာ အခွခေနြထေိုငျသူတှဖွေဈရပါမယျ။ အသငျးတိုငျးဟာ လိဂျထဲမှာ မယှဉျပွိုငျနတေဲ့ ကစားသမားတဈယောကျအား Stand-in အဖွဈ လေးပှဲထိ အသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပွီး Upper Division က အသငျးတဈသငျးကတော့ Lower Division မှာ ကစားနတေဲ့ ကစားသမားတှကေိုပါ ချေါယူ Stand-in ကစားစနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့ မတူညီတဲ့ Region တဈခုကို ပွောငျးလဲကစားခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဘယျအဆငျ့ရောကျနရေောကျနေ ပွောငျးကစားခငျြတဲ့ Region ရဲ့ Open Qualifier ကနေ စတကျရမှာပါ။
Season တဈခုပွီးသှားတာနဲ့ ရရှိတဲ့ အဆငျ့ပျေါမူတညျပွီး Major ပွိုငျပှဲဝငျရောကျခှငျ့တှေ ပျေါလာမှာပါ။ Major ပွိုငျပှဲဝငျရောကျရတာနဲ့ အဲ့ဒီအသငျးရဲ့ လူစာရငျးဟာ Locked ဖွဈသှားပါပွီ။ Major ပှဲပွီးလို့ နောကျ Season မစခငျ အခြိနျအတှငျးမှာတော့ ကစားသမားအရှအေ့ပွောငျး (Roster Change) တှေ ပွုလုပျရမှာဖွဈပါတယျ။ ကစားသမားတဈဦး ပွောငျးရငျ ရထားတဲ့ အသငျး DPC Point ရဲ့ 15% ကို ဖွတျတောကျခံရမှာဖွဈပါတယျ။
Season တဈခုတိုငျးဟာ Major ပွိုငျပှဲတဈခုနဲ့ နိဂုံးခြုပျမှာဖွဈပွီး Region အားလုံးက စုစုပေါငျးအသငျး ၁၈ သငျး ပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ Major တဈပှဲကို ဆုကွေးငှဒေျေါလာငါးသိနျးနဲ့ DPC Point တှေ ခှဲဝပေေးသှားမှာပါ။ ပါဝငျမယျ့ အသငျးတှဟော Regional Upper Division မြားမှ ထိပျဆုံးအသငျးတှဖွေဈပွီး Region အလိုကျ သတျမှတျထားတဲ့ အသငျးပမာဏပဲ ပါဝငျရမှာပါ။
ပါဝငျရမယျ့ အသငျးအရအေတှကျကတော့ ဥရောပနဲ့ တရုတျ Region ကနေ လေးသငျးစီ၊ မွောကျအမရေိကနဲ့ SEA တို့က သုံးသငျးစီ၊ CIS နဲ့ တောငျအမရေိက ကနေ နှဈသငျးစီ ဖွဈပါတယျ။
Wild Card ပွိုငျပှဲပါဝငျလာပွီး အသငျးခွောကျသငျးက Bo2 ပတျလညျဆော့ကစားရမှာပါ။ ထိပျဆုံးနှဈသငျးက မဂြောပှဲရဲ့ Group Stage ကို တကျလှမျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ လေးသငျးကပွုတျမှာပါ။ Wild Card ကစားခှငျ့ရှိတဲ့ အသငျးတှကေတော့
SEA League 3rd place. တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
အုပျစုအဆငျ့မှာ အသငျး ၈ သငျးက Bo2 ပတျလညျကစားရမှာပါ။ ထိပျဆုံးနှဈသငျးက Playoffs ပှဲစဉျတှရေဲ့ Upper Bracket ကို ရောကျရှိမှာဖွဈပွီး 3rd – 6th အသငျးတှကေ Lower Bracket သှားရမှာပါ။ အောကျဆုံးနှဈသငျး အိမျပွနျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အုပျစုအဆငျ့မှာ ကစားရမယျ့အသငျးတှကေ –
2nd Wildcard တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ရှုံးထှကျအဆငျ့ကတော့ နောကျဆုံးကနျြတဲ့ ၁၂ သငျးဟာ Double Elimination ကစားရမှာပါ။ ဒီနရောမှာ အုပျစုဗိုလျအနနေဲ့ တကျလာတဲ့ နှဈသငျးက Region ခွောကျခုက ပထမရထားတဲ့ ခွောကျသငျးနဲ့ Upper Bracket ကစားရမှာပါ။ Region League မှာ ဗိုလျစှဲထားတဲ့အသငျးတှဟော Major တှကေို အုပျစုအဆငျ့က ပွိုငျစရာမလိုပါဘူး။
တတိယမွောကျ Season ပွီးတဲ့အခါမှာတော့ DPC အမြားဆုံးရထားတဲ့ အသငျး ၁၂ သငျးက The International ကို တိုကျရိုကျဝငျရောကျနိုငျမှာဖွဈပွီး ကနျြတဲ့အသငျးတှဟော Region တဈခုကို တဈသငျးပဲတကျမယျ့ နောကျဆုံး Qualifier ကို ကစားရမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုယှဉျပွိုငျရမှာလညျး Open Qualifier မရှိတော့ပါဘူး။ Region တဈခုဆီက တိုကျရိုကျဖိတျချေါမခံရဘဲ ကနျြခဲ့တဲ့ အကောငျးဆုံး ၈ သငျးကိုသာ Close Qualifier တနျးဆော့ကစားခိုငျးမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ နှဈစဉျနှဈတိုငျး Ti ကို ဘယျသူမဆို နောကျဆုံးအခြိနျကနေ ကပျပွီးဝငျရောကျလို့ရတဲ့ စနဈတဈခုကို အပွီးသတျလိုကျတာပါပဲ။
ပွိုငျပှဲကငျြးပမယျ့ နစှေဲ့မြား –
Season တဈခုစီရဲ့ ပွိုငျပှဲကငျြးပမယျ့နစှေဲ့တှလေညျး တဈခါတညျးထှကျလာပါပွီ။ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါတယျ။
ဒီအခြိနျဇယားထဲမှာ မပါဘဲ လှတျနတေဲ့ ကာလတှမှောသာ Third-party တှကေ ကငျြးပတဲ့ (DPC မရတဲ့) ပွိုငျပှဲတှေ ပွုလုပျနိုငျမှာပါ။
TI10 အပြီးမှာ လိဂ်စနစ်ကိုပြောင်းလဲမယ့် Dota2ရဲ့ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမှုပုံစံအသစ်
Ti10 အပြီးမှာတော့ အခုလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့ Dota Pro Circuit နည်းလမ်းကိုလည်း ပြောင်းလဲစွန့်ပယ်တော့မှာဖြစ်ပြီး Tier2နဲ့3အဆင့် အသင်းတွေကို ပိုတိုးတက်စေမယ့် ဒီဇိုင်းနဲ့ အစားထိုးသွားမယ်လို့ Valve က လေသံပစ်ထားပြီးသားပါ။
ယနေ့မှာတော့ Dota2Website မှာ အသေးစိတ် Format တက်လာခဲ့ပါပြီ။ Ti10 အပြီး 2020 – 21 Dota2Season ကို Season3ခု ခွဲခြမ်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး NA, SA, EU, CIS, SEA, China Region ခြောက်ခုတို့မှာ သက်ဆိုင်ရာ Regional League တစ်ခုဆီ ကစားရမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် တစ်နှစ်အတွင်း လိဂ်သုံးခါ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး သုံးခါ တန်းဆင်း၊ တန်းတက်အသင်းတွေ ပေါ်လာမယ်၊ အဆုံးသတ်မှာတော့ The International နဲ့ပဲ နိဂုံးချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Regional Leagues ဆိုတာ –
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဒေသ ၆ မျိုးမှာ လိဂ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီအတွက် Season တစ်ခုကို USD 280,000 ဆုကြေးငွေ ပေးပြီးကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Region တစ်ခုကို တစ်နှစ်အတွင်း Season ၃ ခုကျင်းပမှာဆိုတော့ စုစုပေါင်း USD 840,000 (280,000 x 3) ဆုကြေးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Region ၆ ခုနဲ့မြှောက်ရင် တစ်နှစ်စာကို ဆုကြေးငွေချည်းပဲ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာငါးသန်းကျော် ချီးမြှင့်မှာပါ။
လိဂ်ဆိုတဲ့အတိုင်း အသင်း ၈ သင်းစီပါဝင်တဲ့ Division နှစ်ခု ခွဲပြီး ဆော့ကစားစေမှာပါ။ Upper Division နဲ့ Lower Division လို့ပဲ လောလောဆယ် အမည်ပေးထားပြီး Season တစ်ခုပြီးတိုင်း Upper Division က အောက်ဆုံးအသင်းနှစ်သင်းက Lower Division ကို တန်းဆင်း၊ Lower Division က အောက်ဆုံးနှစ်သင်းနေရာမှာ Open Qualifier ထိပ်ဆုံးအသင်းနှစ်သင်းနဲ့ အစားထိုး ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပမှုပုံစံက အသင်းတွေ ဟိုပြေးဒီပြေးလိုက်ပြိုင်နေရတဲ့ မေဂျာ၊ မိုင်နာပွဲတွေအစား အတည်တကျ အမြဲလက်ရည်သွေးနေရမယ့်ပုံကို ပြောင်းလဲလိုက်တာပါပဲ။
လိဂ် Season တစ်ခုကို ရက်သတ္တပတ် ၆ ခု ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး Bo3 ပုံစံနဲ့ ပတ်လည် (Round Robin) ကစားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားပေးရတာ လွယ်ကူစေဖို့အတွက်လည်း Region ၆ ခု၊ League ၂ ခုကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အချိန်ဇယား မထပ်အောင် ရေးဆွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို Region တစ်ခုမှာ သုံးပွဲကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ပွဲရှိနေမယ့် အနေအထားအပြင် Open Qualifier တွေပါ သုံးခါကျင်းပဦးမှာဆိုတော့ Bet Lord တွေ အကြိုက်ပဲ။
ပထမဦးဆုံး Season မှာတော့ Upper နဲ့ Lower Division ဝင်မယ့် အသင်းတွေကို Valve ကပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ အသင်းတွေဟာ Season မစခင် ဘယ် Region ကနေ ဝင်ဆော့မလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ti10 (The International 2020) ပြီးမှပဲ ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။
Region တစ်ခုမှာ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဆိုရင် အဆိုပါအသင်းရဲ့အသင်းသား အနည်းဆုံးသုံးဦးဟာ ယှဉ်ပြိုင်လိုတဲ့ Region ထဲမှာ အခြေချနေထိုင်သူတွေဖြစ်ရပါမယ်။ အသင်းတိုင်းဟာ လိဂ်ထဲမှာ မယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်အား Stand-in အဖြစ် လေးပွဲထိ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Upper Division က အသင်းတစ်သင်းကတော့ Lower Division မှာ ကစားနေတဲ့ ကစားသမားတွေကိုပါ ခေါ်ယူ Stand-in ကစားစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မတူညီတဲ့ Region တစ်ခုကို ပြောင်းလဲကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေရောက်နေ ပြောင်းကစားချင်တဲ့ Region ရဲ့ Open Qualifier ကနေ စတက်ရမှာပါ။
Season တစ်ခုပြီးသွားတာနဲ့ ရရှိတဲ့ အဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး Major ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ခွင့်တွေ ပေါ်လာမှာပါ။ Major ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရတာနဲ့ အဲ့ဒီအသင်းရဲ့ လူစာရင်းဟာ Locked ဖြစ်သွားပါပြီ။ Major ပွဲပြီးလို့ နောက် Season မစခင် အချိန်အတွင်းမှာတော့ ကစားသမားအရွှေ့အပြောင်း (Roster Change) တွေ ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားတစ်ဦး ပြောင်းရင် ရထားတဲ့ အသင်း DPC Point ရဲ့ 15% ကို ဖြတ်တောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Season တစ်ခုတိုင်းဟာ Major ပြိုင်ပွဲတစ်ခုနဲ့ နိဂုံးချုပ်မှာဖြစ်ပြီး Region အားလုံးက စုစုပေါင်းအသင်း ၁၈ သင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Major တစ်ပွဲကို ဆုကြေးငွေဒေါ်လာငါးသိန်းနဲ့ DPC Point တွေ ခွဲဝေပေးသွားမှာပါ။ ပါဝင်မယ့် အသင်းတွေဟာ Regional Upper Division များမှ ထိပ်ဆုံးအသင်းတွေဖြစ်ပြီး Region အလိုက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသင်းပမာဏပဲ ပါဝင်ရမှာပါ။
ပါဝင်ရမယ့် အသင်းအရေအတွက်ကတော့ ဥရောပနဲ့ တရုတ် Region ကနေ လေးသင်းစီ၊ မြောက်အမေရိကနဲ့ SEA တို့က သုံးသင်းစီ၊ CIS နဲ့ တောင်အမေရိက ကနေ နှစ်သင်းစီ ဖြစ်ပါတယ်။
Wild Card ပြိုင်ပွဲပါဝင်လာပြီး အသင်းခြောက်သင်းက Bo2 ပတ်လည်ဆော့ကစားရမှာပါ။ ထိပ်ဆုံးနှစ်သင်းက မေဂျာပွဲရဲ့ Group Stage ကို တက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လေးသင်းကပြုတ်မှာပါ။ Wild Card ကစားခွင့်ရှိတဲ့ အသင်းတွေကတော့
SEA League 3rd place. တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စုအဆင့်မှာ အသင်း ၈ သင်းက Bo2 ပတ်လည်ကစားရမှာပါ။ ထိပ်ဆုံးနှစ်သင်းက Playoffs ပွဲစဉ်တွေရဲ့ Upper Bracket ကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး 3rd – 6th အသင်းတွေက Lower Bracket သွားရမှာပါ။ အောက်ဆုံးနှစ်သင်း အိမ်ပြန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုအဆင့်မှာ ကစားရမယ့်အသင်းတွေက –
2nd Wildcard တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှုံးထွက်အဆင့်ကတော့ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ ၁၂ သင်းဟာ Double Elimination ကစားရမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ အုပ်စုဗိုလ်အနေနဲ့ တက်လာတဲ့ နှစ်သင်းက Region ခြောက်ခုက ပထမရထားတဲ့ ခြောက်သင်းနဲ့ Upper Bracket ကစားရမှာပါ။ Region League မှာ ဗိုလ်စွဲထားတဲ့အသင်းတွေဟာ Major တွေကို အုပ်စုအဆင့်က ပြိုင်စရာမလိုပါဘူး။
တတိယမြောက် Season ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ DPC အများဆုံးရထားတဲ့ အသင်း ၁၂ သင်းက The International ကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့အသင်းတွေဟာ Region တစ်ခုကို တစ်သင်းပဲတက်မယ့် နောက်ဆုံး Qualifier ကို ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုယှဉ်ပြိုင်ရမှာလည်း Open Qualifier မရှိတော့ပါဘူး။ Region တစ်ခုဆီက တိုက်ရိုက်ဖိတ်ခေါ်မခံရဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံး ၈ သင်းကိုသာ Close Qualifier တန်းဆော့ကစားခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Ti ကို ဘယ်သူမဆို နောက်ဆုံးအချိန်ကနေ ကပ်ပြီးဝင်ရောက်လို့ရတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို အပြီးသတ်လိုက်တာပါပဲ။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့် နေ့စွဲများ –
Season တစ်ခုစီရဲ့ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်နေ့စွဲတွေလည်း တစ်ခါတည်းထွက်လာပါပြီ။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်ဇယားထဲမှာ မပါဘဲ လွတ်နေတဲ့ ကာလတွေမှာသာ Third-party တွေက ကျင်းပတဲ့ (DPC မရတဲ့) ပြိုင်ပွဲတွေ ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။